कद्दू र हरियो सिमीका साथ Chickpea स्टू - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
कद्दू र हरियो बीन्स संग Chickpea स्टू
तरकारीहरू4 व्यक्ति275२ क्यालोरी
यद्यपि हामी वसन्तमा घरमा पहिले नै छौं, हामी अझै रमाईलो गर्दैछौं चम्चा भाँडा जस्तो यो चना स्टू कद्दू र हरियो बीन्स संग।
Un फलफूल र तरकारीहरुका साथ शाकाहारी डिश, पौष्टिक पदार्थहरूले भरिएको छ जुन तपाईंको हप्ता मेनू पूरा गर्न प्रयोग गर्दछ।
यो पनि एक नुस्खा हो जुन तपाईं सक्नुहुन्छ काममा लैजानुहोस् किनभने यो धेरै छ यातायात गर्न सजिलो र तातो गर्न।
1 कद्दू र हरियो बीन्स संग Chickpea स्टू
2 के तपाईं कद्दू र हरियो बीन्सको साथ यस छोसा स्टूको बारेमा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ?
फलफूल र तरकारीहरू उपभोग गर्न एक चम्चा पकवान।
G 45 ग्राम जैतुनको तेल
खुल्ला टमाटर को १ g० ग्राम
२०० ग्राम गोल हरियो सिमी
तरकारी ब्रोथ को 500 ग्राम
१ चम्मच ला भेरा पेप्रिकाको
१/२ चम्चा (मीठो आकार) हल्दी
हामीले काँसामा खुलेको टमाटर राख्यौं र यसको लागि कुचल्यौं Seconds सेकेन्ड, गति 5। हामी फिर्ता र आरक्षित।
सिसा नधोईकन, प्याज र लसुन थप्नुहोस्, खुल्ला र ठूलो टुक्रा मा काट्नुहोस्। हामी उनीहरूलाई टोक्छौं Seconds सेकेन्ड, गति 5। हामी टुक्राहरू ब्लेड तर्फ कम गर्छौं।
अर्को हामी आरक्षित टमाटर, पेप्रिका, हल्दी र मौसम थप्छौं। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, १००º, गति १।
हामी भैंसीलाई मध्यम क्युब्समा काट्न समय लिन्छौं।
समय पछि, हामी तिनीहरूलाई हरियो सिमी र तातो तरकारी ब्रोथको साथ गिलासमा थप्छौं। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, १००º, चम्चा गति, बाँया पालो।
अर्को, हामी पकाएको छोला, राम्रोसँग धुलो र सुकाइन्छौं। हामी नुन र मरिच सुधार गर्छौं र प्रोग्रामिंग द्वारा खाना पकाउन जारी राख्छौं Minutes मिनेट, १००º, चम्चा गति, बाँया पालो।
समयको अन्तमा, हामी स्ट्युलाई कचौरा वा गहिरो प्लेटहरूमा वितरण गर्दछौं र तातो सेवा दिन्छौं।
के तपाईं कद्दू र हरियो बीन्सको साथ यस छोसा स्टूको बारेमा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ?
तपाईंले जान्नुपर्ने पहिलो कुरा यो રેસिपे एक हो जुन समयसँगै सुधार हुन्छ, त्यसैले नहिचकिचाउनुहोस् अग्रिम गर र यसलाई स्वादहरू बसोबास गर्न बस्न दिनुहोस्।
मैले माथि भनें, यो एक आदर्श शाकाहारी रेसिपी हो किनभने फलहरू र तरकारीहरू थपेर हामीले थपेका छौं हल्दी यसलाई रंग दिन र संयोगवश, यसको राम्रो गुणहरूको फाइदा लिन।
यो नुस्खा बनाउन बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईको आफ्नै छोला पकाउनुहोस् वा प्रयोग गर्नुहोस् चिसो भाँडोबाट पकाइसकेको छ। यदि तपाईं यो भर्खरको संस्करण प्रयोग गर्नुहुन्छ भने याद गर्नुहोस् तिनीहरूलाई राम्ररी कुल्लेञ्जेल तिनीहरू उप्रान्त फोम नहालेसम्म
यदि तपाईंसँग छैन भने तरकारीहरू सूप तपाईं १ टेबल स्पूनको साथ g०० ग्राम पानी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ घरेलु शोरबा घन। यो वैकल्पिक हो जुन मैले धेरै प्रयोग गर्दछु र, सत्य यो हो कि यो एकदम राम्रो काम गर्दछ किनकि यसले भाँडामा स्वाद थप्दछ।
को हरियो सिमी मैले यो नुस्खा गोल बनाउनको लागि प्रयोग गरेको छु, बोबी प्रकार। तिनीहरू नरम र सपाट भन्दा पकाउन छिटो छन्।
तिनीहरू पनि हुन सक्छन् ताजा वा स्थिर। यदि तपाईं यो विकल्प प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं पनि तिनीहरूलाई डिफ्रोस्ट गर्न आवश्यक पर्दैन तर धेरै बरफ प्राप्त गर्न को लागी प्रयास गर्नुहोस् ताकि श्रोठ चिसो हुँदैन।
यो डिश पनि हुन सक्छ फ्रिज, त्यसैले यदि तपाईं सँग एक अंश बाँकी छ, यस मा एक लेबल राख्न संकोच र यसलाई स्थिर गर्नुहोस्। फ्रिजरमा शेल्फ लाइफ3महिना सम्म हुन्छ।
थप जानकारी - हरियो टैबुल / आधारभूत नुस्खा: थर्मामिक्सको साथ छोला पकाउनुहोस् / मूल विधि: तरकारी केन्द्रित ब्रोथ ट्याब्लेटहरू
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: स्वस्थकर खाना, तरकारीहरू, साप्ताहिक मेनू
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » तरकारीहरू » कद्दू र हरियो बीन्स संग Chickpea स्टू
एम कारमेन भन्यो
शुभ साँझ, माया, यो नुस्खा सुपर स्वस्थ र सामग्रीहरू जुन हामीसँग घरमा सामान्य रूपमा हुन्छ
तर यो चक्कु गार्डको साथ गर्न सकिन्छ यसलाई लामो छोड्नुहोस् ताकि सबै थोरै कोमल छ, हैन?
M Carmen लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते एम कारमेन:
हो, तपाईं ब्लेड गार्ड चरण and र between बीचमा राख्न सक्नुहुन्छ।
तपाईको टेन्डर बन्नको लागि तपाईले धेरै चीजहरूलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ: पानी कडाई, टुक्राहरूको आकार र हरियो सिमीको प्रकार।
म सिफारिस गर्दछु कि चना पहिले नै तयार छ। यस नुस्खामा, तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको तिनीहरूलाई अन्तमा थप्नुहोस् ताकि स्वादहरू मिश्रित हुन्छन्।
हरियो बीन्स, राउन्डहरू राम्रो हुन्छन् किनकि उनीहरू पहिले पकाउँदछन् र फ्ल्याटमा भन्दा बढि कोमल हुन्छन्।
कद्दू धेरै छिटो पकाउँदछ, ताकि यो टुक्रिन नपरोस्, यसलाई मध्यम-ठूला क्युब्समा काट्नु राम्रो हुन्छ। अन्यथा तिनीहरू अलग हुनेछन् र शोरबामा छाउनीमा रहनेछन्।